Kazakhstan: Terantany avy any Kazakhstan nivoaka tamin’ny vaovao maneran-tany – nosamborina ny anankiray, ny iray hafa nisy namono · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2011 9:11 GMT
Terantany avy any Kazakhstan anankiroa no nivoaka tamin'ny vaovao iraisam-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo, nampalahelo avokoa ny nanjo azy roalahy.
Ny voalohany, Valeriy Tolmachev, mpanolon-tsaina ao amin'ny UNESCO any Kazakhstan, nanafika mpanamory fiaramanidina iray tamin'ny antsy nandritra ny dia Paris-Rome ary nandidy ity farany hamily ny dia ho any Lybie. Voafehin'ny mpanamory tao anaty fiaramanidina anefa ny toe-draharaha ka nosamborina ity noheverina ho olon-dratsy ary nampidirina am-ponja any Italia. Ny fanadihadihana no nahafantarana fa tsy milamina ara-tsaina loatra ity rangahy ity.
Nemtschin nanamarika [ru]:
Tsy manam-bitana mihitsy i Kazakhstan miaraka amin'ireo masoivohony. Tsy faly tamin'ny làlana nofidian'ny mpitondra fiarakaretsaka nitondrana azy tany Berlin ny anankiray amin-dry zareo, nidaroka ilay mpamily izy ka nandona fivarotana. Tamin'ny andro hafa koa, nalaza tamin'ny tsy fandoavany sazy vokatry ny fiantsonana eny amin'ny toerana tsy tokony hanaovana izany ny masoivohon'i Kazakhstan tany Londres. ankehitriny, mpiasan'ny UNESCO nanodinkodina fiaramanidina. Amin'izany rehetra izany dia miezaka manazava amin'ny rehetra ny mpiara-miasa amin'izy ireny fa tsy olon-dratsy izy ireny….
Megakhuimak manampy sady mananihany[ru]:
Nambara tamin'ny vaovao iraismpirenena in-dimy na im-polo mihoatra ny fihaonam-be OSCE sy ny lalao ririnina any Azia ilay mpanodinkodina fiaramanidina antsoina hoe Tolmachev. Nahoana isika no handany vola amin'izany?
Ilay blaogera rosiana malaza Dolboeb tsy nanadino nampahatsiahy ny toetran-dry zareo mampalaza azy, miaraka amin'ny any avy any Kazakhstan any Andrefana:
[Ny filoha any Kazakhstan ] Nazarbayev manana talenta manokana amin'ny fifidianana izay ho masoivoho hisolo tena ny fireneny any Eoropa. Nahatonga ny fikatsoana nandritra ny roa taona tao amin'ny LiveJournal any Kazakhstan ny anankiray amin'izy ireny (jereo ity lahatsoratra ity], anankiray hafa saika hanodikodina fiaramanidina hankany Lybia…Modely amin'ny fitondran-tena amin'izany zavatra rehetra izany i Borat Sagdiev.
Tsy mahafinaritra koa ny zavatra nitranga faharoa – lasa lasibatra tamin'ny zavatra tsy nampoizina ny terantany avy any Kazakhstan iray. KZBlog, blaogera vahiny monina any Kazakhstan, manazava:
Tantara mampihoron-koditra izy ity ary nanjary nitarika faharatsian'endriky ny terantany avy any Kazakhstan monina any Etazonia. Tovolahy iray antsoina hoe Kirill Denyakin, 26 taona, niasa tao Portsmouth, no notifirin'ny polisy. Mamo izy ary nandondona mafy tao amin'ny varavaran'ny trano nipetrahany niaraka tamin'ny namany anankiray. tsy azoko fa mpifanolo-bodirindrina aminy no niants ny 911 ary nilaza fa mamaky varavarana izy…Afaka nolazainy hoe mamo i Denyakin ary tsy mahazo ny fomba fiasan'ny polisy amerikana any Etazonia. Marina fa tsy nety ny nataony. Kanefa tsy heloka be vava akory…Inoako fa hisy ny fanadihadihana lalina ary hofaizina araka ny nataony ilay polisy nitifitra.
HamptonRoads mitantara ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny lehiben'ny polisy mikasika ny zavatra nitranga tao Portsmouth:
“Tsy noraharahiany ny fampitandremana am-bava nataon'ny polisy azy. Nampidininy haingana tany amin'ny valahany ny tanany, teo amin'ny fasiana fehikibo, ary avy eo notondroiny ilay polisy. Nihemotra namonjy ny sisin'ny arabe ilay polisy ary nanohy hatrany ny fampitandremana am-bava. Nanohy ny nataony tamin'ilay polisy hatrany koa ilay rangahy, ka izany no nahatonga an'ilay polisy nampiasa ny fitaovam-piadiana teny aminy hanajanonany ny fandrahonana.”
Nilaza ny namany sy ny mpiara-miasa tamin'i Denyakin fa nanohina azy ireo ny fahenoana fa maty notifirina izy. Nolazain'izy ireo fa olona niasa tsara izy sady niasa mafy ary tsy mba kivikivy.
Tao amin'ny lahatsoratra hafa tao amin'ny HamptonRoads, mpanao tantara iray atao hoe Roger Chesley nilaza fa:
Tsy hanameloka ny polisy mihitsy ny mpampanoa lalàna ao Portsmouth, satria mahalana no ahitana polisy melohina eo am-panaovana ny asany raha mitifitra olo-meloka izy ireny.
Vaovao farany navoakan'i Kruzhechka mikasika ny fatin'i Denyakin [ru]:
Voatifitra im-betsaka i Kirill tamin'ny faritra samy hafa – tahaka ny hoe niaro tena izy. Nilaza ny ray aman-dreniny fa ny bala anankiray dia niditra teo amin'ny sandriny ary tafajanona tao an-tendany. Ahoana no nahatonga an'izany? Angamba, mbola notifirina ihany izy na dia efa maty aza…
Shabaldina nitroatra [ru]:
Mampatahotra ahy loatra ity resaka iray ity. tsy afaka milaza ny momba azy ity am-pilaminana aho… Fantatra izao fa bala 11 no hita tamin'ny tenany fa tsy 6 araka ny fahita ao anaty fahana basy iray, ary ny sasany amin'ireny no niditra avy any an-damosiny. Angamba miresaka ohatry ny Filistina aho, kanefa te hanontany ihany aho : mino ve ianao fa ny vola aman'arivony tapitrisa atosaka maneran-tany hiarovana ny endrika tsaran'i Etazonia dia hitondra fiovana? Hanampy ny fianakavian'i Kirill amin'ny ady ataony amin'i Etazonia ve izany? Azony an-tsaina ve ny mety hataon'ny masoivohon'i Etazonia raha ohatra ka hoe polisy avy any Kazakhstan anankiray no nitifitra terantany amerikana? Hatramin'izao aloha dia niasa tsara foana ny masoivohontsika – nametraka taratasy somary masiaka ihany izy ireo ho fanoherana ny zava-nitranga, nanampy ara-bola sy ara-pitsarana. Ho todiny hatramin'ny farany ve izany? Ampifanindriako ny rantsan-tanana.
Ny tena vaovao farany mikasika ity raharaha ity dia ny fitoriana ny departemantan'ny polisy ao Portsmouth nataon'ny fianakavian'i Denyakin. Efa nahazo taratasy ny departemantan'ny polisy amerikana fa mitaky onitra ho an'ny fianakvian'i Denyakin ny masoivohon'i Kazakhstan.
Nankany Etazonia i Kirill noho ny tetikasa Miasa sy Mandeha ary nanapan-kevitra fa hijanona hiasa ao amin'ny Renaissance Hotel mandritra ny roa taona hanao mpahandro.